Tababaraha Masar Xil Ku Raali Geliyey Ciyaaryahanka Maxamed Salah | Biyoguurenews.com
Home Wararka Tababaraha Masar Xil Ku Raali Geliyey Ciyaaryahanka Maxamed Salah
Tababaraha Masar Xil Ku Raali Geliyey Ciyaaryahanka Maxamed Salah
Tababaraha xulka Masar Hossam El Badry ayaa ku dhawaaqay in xiddiga Liverpool Mohamed Salah inuu noqon doono kabtanka cusub ee xulka Qaranka.
Go’aankaan ayaa cadeyn u ah sida xiddiga garabka ka ciyaara uu muhiim ugu yahay xulka qaranka Masar.
Tababare El Badry ayaa sheegay in Salah uu ciyaaryahan muhiim ah u yahay qaranka, waxaana uu sheegay inuu xiriir la sameyn doono si uu xal ugu helo dhibaatada dhex taala isaga iyo xubnihii hore ee boodhka xiriirka kubada cagta Masar.
Salah ayaa si weyn loo dhaleeceeyay ka dib markii xulka Masar ay xilli hore ka hareen Koobkii Qaramada Afrika oo ay martigelisay Masar.
Masar ayaa ku hartay wareega 16ka ka dib markii ay guuldarro 1-0 ka soo gaartay South Africa, xiriirka kubada cagta Masar ayaana ceyriyay tababarihii reer Mexico Javier Aguirre iyadoo boodhka oo dhan ay iscasileen.
Mohamed Salah ayaa ku hogaamiyay xulka qaranka Masar Koobkii Adduunka 2018 waxayna aheyd markii seddexaad ee ay Koobka Adduunka ka soo muuqdaan iyo markii ugu horeysay ee tan iyo 1990.
Dhaawac garabka ah oo soo gaaray finalkii Champions League ee 2018 ayaa xadiday ka qeyb qaadashadiisii Koobkii Adduunka.
El Badry ayaana doonaya in Mohamed Salah uu mar kale xulka Masar ku hogaamiyo Koobka Adduunka ee 2022 ee lagu qabanayo dalka Qatar.
In Salah loo magacaabo kabtanka Masar ayaa ka dhigan mid raaligelin ah iyadoo dhawaan uu ka carooday inuusan cod ka helin wadankiisa abaalmarintii xiddiga sannadka adduunka ee FIFA.
Inkastoo Masar ay sheegtay in FIFA ay isdabarin sameysay oo ay u codeeyeen Salah halka FIFA ay ku marmarsiyoodeen in far waa weyn lagu qoray kaarka codeynta sidaasi darteedna aan codka loo diiwaangelinin.
Previous article28 sano ayuu kasoo horjeeday somaliland madaxawyanaha geelaha jabuuti, walahi haduu inaga hadhi waayo faylalkan ka hayo… Eng Faysal cali waraabe
Next articleSomaliland Oo Wefti U Diraysa Maamulka Jubbaland Iyo Ujeedada Ay U Socdaan